कसरी जित्यो एक बैंकरको परिवारले कोरोनासँगको युद्ध ? Bizshala -
एक सदस्य बिते, बाँच्नेले अपनाए अनुकरणीय जीवनशैली
बैंंकर अनलराज भट्टराईको परिवारमा एकैचोटि ८ जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखियो । यो गएको साउन २६ गतेको कुरा हो । आज भदौ १३ गते, शनिबार । उनीसहित उनको परिवारका ७ जना संक्रमित आज कोरोनामुक्त भइसकेका छन् ।
यतिखेर उपत्यकामा निषेधाज्ञा छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न यसो गरिएको हो भनिएको छ । तर कसरी कम गर्न सकिन्छ त जोखिम ?
कसरी जित्न सकिन्छ कोभिड १९ लाई ? केके छन् त अप्ठेरा, चुनौती ? र, तिनलाई कसरी पन्छाएरै गर्न सकिन्छ जीवनरक्षा ? भट्टराई परिवारले कसरी जित्यो त कोरोनासँगको युद्ध ?
यस्तै प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा आधारित भट्टराईको त्रास, आश र उत्साह अनुभूतिः
समग्र नेपालीको मनमा अहिले संक्रमणको त्रास छ । हामीलाई पनि कहाँनिर संक्रमण हुने हो भन्ने नै त्रास थियो ।
सुरुमा मेरो ससुराबालाई ज्वरो आयो । भोलिपल्टै ठीक भयो । त्यसको तीन दिनपछि फेरि ज्वरो आयो । अनि घरमै चिकित्सक बोलाएर उपचार गरायौं । यूरिन इन्फेक्सन देखियो । औषधोपचार गर्दै थियौं ।
बुवाको आरडिटी टेष्टमा नेगेटिभ देखियो । हामी मास्क लगाएरै बसेका थियौं स्यानीटाइजर प्रयोग गर्दैै ।
पछि श्वासप्रश्वासमा अलिक समस्या देखिएपछि हामीले उहाँलाई अस्पताल लग्यौं ।
उहाँको पीसीआर टेष्ट गराएको भोलिपल्ट रिपोर्ट आयो । रिपोर्टमा पोजेटिभ हो कि भन्ने आयो । अनि हामी सबैजना तत्काल आइसोलेसनमा बस्यौं, घरमै ।
रिपोर्ट भेरिफाइ भएर नआउँदा एक किसिमको मानसिक दवाब हुने रहेछ ।
२६ गते ११ बजे टेकुबाट रिपोर्ट भेरिफाइ भएर आयो । पोजेटिभ नै हो भन्ने पक्का भयो । तर १० बजे नै उहाँको डेथ भइसकेको थियो ।
उहाँ ७६ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । दिनमा कम्तीमा पनि बिहान आधाघण्टा र बेलुका आधा घण्टा हिँड्नुहुन्थ्यो उहाँ । तर, उहाँको शरीरमा मधुमेह थियो ।
संक्रमण हुँदाको लक्षण हामीले बुझेजस्तो देखिएन । यूरिन र ब्लड कल्चर गर्दा इन्फेक्सन देखिएको थियो । कोभिड १९ कै क्रममा यो हुने रहेछ ।
कसैलाई कुनै त कसैलाई कुनै लक्षण देखिने रहेछ ।
कसरी संक्रमण भयो भनेर चाहिँ अनुमान गर्नै सकिएको छैन । परिवारभित्रै पनि कोही संक्रमित कोही चाहिँ मुक्त अवस्थामा कसरी भयो होला ।
यो त एउटा रहस्यमय रोग लाग्यो । कसरी सर्छ भन्ने नि थाहा भएन ।
म झन् ससुरा बुवाको नजिकै थिएँ । अस्पतालमा कुरुवा बस्थेँ । तर मलाई संक्रमण देखएिन । म चाहिँ के गर्थेँ भने, गार्गल गरिरहन्थेँ दिनमा चारपटक । स्यानिटाइजर र मास्कको प्रयोग गर्थेँ । बस्न त हामी सँगै बसेका थियौं र पनि नेगेटिभ देखाउनुमा मैले अपनाएको सुरक्षा हो कि जस्तो पनि लाग्छ ।
हामीमाथि बज्रपात नै पर्यो । हामी पीडामा थियौं ।
मानसिक हिसाबले हामीलाई दुवै किसिमको तनाव भयो । एउटा शोक, नजिकको अभिभावक गुमायौं । अर्को हामीलाई पनि संक्रमण छ कि ? अब के हुने होला ? भन्ने त्रास । दिमागी हालत ठीक नहुने स्थिति थियो ।
तर हामीले, अब कसरी अगाडि बढ्ने त भनेर निराश नभई काम गर्न तयार भयौं ।
मृतकको सबै व्यवस्थापनको सेनाको टिमले गर्ने रहेछ ।
छरछिमेकी नातागोताहरु आउन चाहनेहरुलाई पनि हामीले रोक्यौं । नआउनूस् भन्यौं । हामी त एक्स्पोज नै भएका थियौं । त्यसैले हामी १० जना थियौं घाटमा ।
त्यहाँ आउनुभएकालाई पनि धेरै कुरा नगरी घर पठायौं । डर थियो नि त मनमा, के हुने हो भन्ने । सुरक्षित रहन त सघाउनै पर्ने थियो ।
हामी ११ जनामा ७ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । ससुरालीमा ४ जना, मेरो घरमा २ जना र अर्को एक जनासहित ७ जना । हाम्रो घर ५० मिटरको दुरीमा छ ।
कोभिडको लक्षण त केही पनि देखाएको थिएन । तर पनि हामी पूरै आइसोलेसनमा बस्यौं ।
कसैलाई पनि संक्रमण हुन नदिने गरी, बाहिरको कसैलाई पनि घरमा आउन दिएनौं हामीले । हेल्प गर्छु भन्नेलाई पनि आउन निरुत्साहित गर्यौं ।
काजकिरियाका लागि सामानको जुगाड गर्न मुश्किल परेको थियो । तर रिपोर्ट नेगेटिभ देखाएको ४ जनामध्येबाट बन्दोबस्त गर्न सहज भयो ।
मेरो त रिपोर्ट नेगेटिभ नै थियो । र पनि, संक्रमण त कहाँ हुन्छ थाहा हुँदैन । अनि म पनि २० दिन आइसोलेसनमा बसेँ ।
संक्रमण भइसकेपछि अब रक बटनमा पुगेको आभाष भयो । अनि आशका कुरा मात्र गर्न थाल्यौं ।
कुनै पनि रोग कसैले अपराध गरेर, अनैतिक काम गरेर, कसैलाई दुव्र्यवहार गरेर लाग्ने होइन । त्यसैले कसैले पनि यसलाई लुकाउनुपर्ने आवश्यक नै छैन ।
हाम्रो समाजमा चाहिँ लुकाउने चलन थियो, मैले चाहिँ बताउनुपर्छ भनेँ । यो त जसलाई पनि हुनसक्छ, फरवार्ड अप्रोचमा जानुपर्छ भनेर मैले बोल्न थालेँ ।
युट्युवमा पनि मेरो भर्सन राखेको छु । सामाजिक सञ्जालमा लेखिरा’छु पनि । सायद म पहिलो व्यक्ति हुँला यसरी कोरोना संक्रमण भएपछिको कुरामा ओपन अप भएको, हामी छौं भनेर कुरा गरेको ।
आफ्नो तर्फबाट मात्र हैन अरुका तर्फबाट पनि सोच्नुपर्छ । मैले चाहिँ हिम्मत गरेको हुँ, अरुलाई प्रेरणा होस्, हौसला होस् भनेर ।
मलाई आफन्त र साथीहरुबाट आएको सकारात्मक प्रतिक्रियाले चाहिँ म दंग परेँ । समाजमा जुन त्रास छ, त्यसलाई शुभकामनाहरुले जित्यो।
हामीले गरेको दुईवटा मुख्य काम हुन् । एक शारीरिक तन्दुरुस्ती बढाउने र अर्को मानसिक रुपमा बलियो हुने ।
शारीरिक तन्दुरुस्तीका लागि हामीले केही काम गर्यौं ।
मल्टीभिटामिन, जिंक, भिटामिन सी र ई गरी चार ट्याब्लेट प्रत्येक दिन एकएकवटा खायौं । हप्तामा एकचोटि भिटामिन डी खायौं ।
घाटीका लागि कुल्ला गर्यौं । पहेँलो रङ्को गार्गल गर्ने बेटाडिनले । पानी मिसाएर दिनमा कम्तीमा ३ पटक । बिहान उठ्नेवित्तिकै, खानेकुरा खानुभन्दा १५ मिनेट अगाडि ।
दिनभरिमा करीब चार लिटर मनतातो पानी पियौं । पानी ल्याउन गाह्रो हुन्छ भनेर एकैपटक ल्याएर राख्थ्यौं ।
बेसारमा ज्वानो, गुर्जु, तुलसीको पत्ता र मह लगाएर राम्रोसँग पानीमा पकाएर दिनमा तीन चोटि नियमित खायौं ।
४ घण्टाको अन्तरालमा शरीरको तापक्रम मापन गरिरहने काम गर्यौं । आफ्नै शरीर हो भन्दै नापिरहन्थ्यौं । ज्वरो बढ्छ कि भनेर डर हुन्थ्यो अनि जब ठीक डिग्री आउँथ्यो अनि कन्फिडेन्स लेवल बढेर आउँथ्यो ।
अनि अर्को चाहिँ अक्सिजन लेवल नाप्ने काम हुन्थ्यो । अक्सिमिटरबाट । यो सबैका लागि सहज पहुँचमा नहुनसक्छ । अलिक महंगो पर्छ । हामीले चाहिँ अनलाइनबाट मगायौं ।
यसमा पहिलोपटक नापेको रेकर्डमा अर्को दिन ३ प्रतिशत घट्यो भने तुरुन्त डाक्टरकोमा जानुपर्ने थियो ।
सुरुको दिनमा डर लाग्यो, नाप्न पनि सकेनौं । अनि भोलिपल्ट बिहानै नाप्यौं । यसरी मनलाई बलियो बनाउन हरप्रयास गर्यौं । श्वासमा पनि समस्या देखाएन ।
आफूलाई इन्गेज गर्न विभिन्न कुरामा लाग्यौं । कसैले फोनमा आफन्त साथीभाइसँग कुरा गर्ने, कोही टेलिभिजन हेर्ने, सिरिज हेर्ने । आआफ्नो रुचिअनुसारका काममा लाग्यौं ।
हामीले कोभिड १९ को बारेमा संसारभरका पोजेटिभ समाचार मात्र खोजेर हेर्यौं । नेगेटिभ मेसेज दिने केही पनि हेरेनौं । पढेनौं ।
त्यसले पनि आत्मबल बढाउन सघायो ।
म पहिले पेन्टिङ् गर्थेँ । कोठामा एक्लै बसेर त्यो काम गर्न थालेँ । मैले १५ वटा बनाएछु । दिनमा तीनचार घण्टा त्यसमै व्यस्त हुन्थेँ । फोटो खिचेर फेसबुकमा राखेको छु मेरा काम । आफैंले आफ्नो कामको भिडियो खिचेर यूट्युवमा अप्लोड गरेँ ।
यसरी अघि बढ्दा हामी मानसिक रुपमा दह्रो बन्दै गयौं । त्रासलाई हटाउँदै आशको भागलाई बढाउन लाग्यौं । कुनै पनि दिन ९८ डिग्री फरेनहाइटभन्दा बढी ज्वरो हुन दिएनौं हामीले ।
न रुघा, न खोकी, न कुनै लक्षण । केही पनि देखिएन । त्यही नै जीत थियो हाम्रो लागि ।
हामी सातै जना होम क्वारेन्टाइनमा बसेका थियौं । हामीलाई त्यस्तो धेरै अप्ठेरो महसुस हुन पाएन । पसलका सामान ढोकामा ल्याएर राखिदिन्थे । प्रत्येक फ्लोरमा बाथरुम थियो । तला तलाबाट सामान लिने लैजाने सिस्टम बनाएका थियौं ।
कौसीमा डिस्पोज गर्ने सामान राख्न ठाउँ बनाएका थियौं । सबै प्लास्टिकका भाँडा प्रयोग गथ्र्यौं । पुनः प्रयोग गर्नु नपरोस् भनेर ।
यो पछिल्लो लकडाउनको ३ दिन अवधिमा चाहिँ हामीले प्लास्टिकको प्लेट पाउन सकेनौं । किन्न पनि पाएनौं । हामीले घरमै भएका भाँडा एकपटक मात्र प्रयोग गर्ने गरी चलायौं ।
सरकारले पनि यस्तो बेलामा कनेक्सन टुटाउने सामाग्री उपलब्ध हुने अवस्था बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
भर्याङको आधासम्म खानेकुरा ल्याइराखिएको हुन्थ्यो । एक तलाकोले अर्को तलासम्म पुर्याइदिने गरिएको थियो । खानेकुराका भाँडालाई पहिले हामी स्यानिटाइज गथ्र्यौं अनि मात्र त्यसमा राखिएको खाना खान्थ्यौं ।
प्रत्येकचोटि बाहिरबाट सामान आउनेबित्तिकै स्प्रे स्यानिटाइज खुब गर्यौं । चेन ब्रेक गर्ने प्रोटोकल हामीले राम्ररी मेन्टेन गरेका थियौं ।
एकले अर्कोलाई नदेख्ने गरी हामीले आइसोलेसनको व्यवस्था मिलाएका थियौं ।
कोठामा चाहिँ हावा प्रशस्त चल्ने गरी झ्याल ढोका खोल्नुपर्छ । वायु मज्जाले चल्ने होस् तर चिसो चाहिँ पटक्कै नखाने । मनतातो पानी मात्र पिउने । त्यसैले पानी तताउने भाँडो पनि प्रत्येकलाई व्यवस्था गरेका थियौं ।
यो अवस्थामा पनि कसैलाई कुनै किसिमको त्रास भएन । संसारमा सोच्न अनेक कुरा छन् । कोरोनाको त्रासबारे किन सोच्नु र ?
हरेक रात सुत्नेबेलामा एउटा सोच चाहिँ आउँथ्यो, अब के हुन्छ कसो हुन्छ भन्ने भावको । तर त्यो बेलामा सोच्थेँ, भोलि राम्रो बिहान आउँछ, सबै राम्रो हुन्छ । र, सुत्थेँ ।
अब त त्रास शून्य छ । आश गर्नुपर्ने केही बाँकी रहेन ।
अब हामी सक्छौं भन्ने उत्साह मात्र छ ।
एक दर्जन सदस्यसँगै एउटै घरमा बसेर पनि कोभिडलाई जित्न सकिने रहेछ । म केहीसँग लडिरहेको छु भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ ।
अब चाहिँ एकदम सुरक्षित हुनुपर्ने, बच्नका लागि सम्पूर्ण उपाय अपनाउनुपर्ने अवस्थामा छौं ।
उत्साहमा हुँदा म हैन मेरो शरीर हो भन्ने सोच्नुपर्छ । शरीरलाई मैले बचाउन नाक बन्द गर्नुपर्ने, मास्क लगाउनुपर्ने, हातले आँखामुखनाक नछुनुपर्ने कुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
कोभिडले शरीर खोज्छ, यसले कसैलाई चिन्दैन । शरीर बचे म बच्छु भन्ने भावना र म शरीरलाई बचाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्छ ।
शरीरलाई ‘म’को घमण्डबाट बचाउनुपर्छ ।
शरीर प्लास्टिकको सामान होइन काँचको सामान हो । यो फुट्नसक्छ । त्यसैले म फलानो हुँ मलाई केही गर्न सक्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन ।
आत्तिनुपर्ने होइन सतर्क हुनुपर्ने हो । कोभिड छ कि भन्ने आशंका लागेमा टेष्ट गर्नुपर्छ ।
अस्पताल जाने र ? अरु नै होला भन्ने कुरामा अल्झिनु हुन्न रहेछ ।
सबैले टेष्ट गराउनसक्ने अवस्था छैन । आर्थिक कारण । सरकारले बुझ्नुपर्ने के हो भने, अहिलेको अवस्थामा सडक बनाउने भनेकै जनता बचाउने हो ।
जनता नै भएनन् भने सडकमा को हिँड्ने ? त्यसैले अस्पताल थप्नुपर्यो, स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्यो । कुनै पनि हालतमा स्वास्थ्यकर्मीलाई निरुत्साहन गर्नुभएन ।
डाक्टरको घरमा पनि संक्रमितको घर भनेर लेखिएको भन्ने सुनेर चाहिँ मलाई एकदम दुःख लागेको थियो । हामी गौरवशाली नेपाली होइन रहेछौं । खराब मानसिकता प्रस्तुत भएका कारण हामी त धेरै पिछडिएका रहेछौं भन्ने बोधले धेरै पीडा भयो त्यसबेला ।
सबैलाई म के अनुरोध गर्छुु भने टेष्ट गर्ने, आइसोलेसनमा बसिहाल्ने, नडराउने तर रिपोर्ट नआउञ्जेल कतै नहिँड्ने कुरामा आफू प्रष्ट हुनुपर्छ । अरुलाई संक्रमण हुनबाट जोगाउन हामी स्वयम् संयमित हुनुपर्छ ।
मनोबल उच्च भयो भने कोभिड १९ शतप्रतिशत निको पार्न सकिन्छ । यसका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरौं ।
-जीवन बिष्ट धनगढी । ‘नेपालीको आत्तिने बानी, छिटो प्रगति भएन, पैसा...
-जीवन विष्ट धनगढी । देशमा ‘लकडाउन’ भएपछि स्कूल कलेज सबै बन्द भए ।...
सुजाता पन्त पेशाले मेडिकल एमबीबीएस डाक्टर हुन् । उनी हाल हेटौँडा...
उषा सापकोटा साझा बसकी सहचालक हुन् । विगत एक वर्षदेखि उनी यो भूमिकामा...
नाममा कसैको निजी अधिकार हुन्न भन्ने प्रविन पन्दाक लिम्बु नायिका...
झापाको बुधबारेमा जन्मेर काठमाडौं हुँदै जापानमा कर्मथलो बनाउँदै...
–नरेन्द्रकुमार नगरकोटी जब बन्दाबन्दीको घोषणा भयो। सबैभन्दा...
संजोग कोइराला चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हुन्, नायक हुन् अनि व्यवसायी...